Fiatrehana ny fihodinana faharoa Vonona hanarina ny lesoka ny CENI
Nodidiana ny eo anivon`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) sy ireo kandidà mba hijery ireo fandaminana mba hanala ireo ahiahy samihafa izay hita nandritra ny fihodinana voalohany momba ny fikirakirana ny fifidianana.
Nanazava hatrany ny filoha lefitry ny CENI, Philbert Hervé Andriamanantsoa fa tsy nifanalavitra ireo vokatra navoakan`ity vaomieram-pirenena ity sy ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). Midika izany, hoy izy fa tsy misy ny olana tamin`ny fikirakirana izay nataon`izy ireo satria nanisa vato manokana mihitsy ny teo anivon`ny HCC ary tsy nijery ny vokatra navoakan`ny CENI Madagascar. Hiditra amin`ny fihodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena. Mahakasika ireo lesoka tamin`ny fihodinana voalohany dia nisy ny fanadihadiana ary fepetra maro no horaisina hanatsarana azy. Mahakasika ny rindram-baiko dia nanantitrantitra i Philbert Hervè Andriamanantsoa fa misokatra foana ny CENI. Nohamafisiny fa nanana ny rindram-baikony manokana ny HCC sy ny CENI kanefa voka-pifidianana mitovy no navoakany, izany hoe tsy tany amin`io lafiny io ny olana. Vonona hiara-kiasa amin`ny kandidà sy ireo mpanara-maso amin`ny fifidianana ity vaomiera misahana ny fikarakarana ny fifidianana ity mba ahafahana miantoka ny mangarahara ny fifidianana. Hanamafy ny fanabeazana olo-pirenena izy ireo indrindra eo amin`ny biletà tokana mba tsy hisian`ny vato maty be loatra sy mba hiantohana ny safidy marina ny mpifidy ka hisy ezaka manokana miaraka amin`ny vondrona afrikanina izay hanao fanentanana. Miomana ny CENI amin`ny fanotana tahirin-kevitra (impirmès sensibles) izay atao atsy Afrika Atsimo. Mahakasika ny fanalana olona eo anivon`ny CENI dia tsy misy antony manokana nandraisan`izy ireo fanapahan-kevitra tamin`ny fandroahana mpiasa fa fanatsarana ny asa. Misy mpiasa tsy nanaja ny fitanilana ka nisy fitarainana nataon`ireo kandidàa; Nisy ihany koa ireo tandrevaka ka nandraisana fepetra avy hatrany, hoy hatrany izy.